Cilmi baaris: Dadka Soomaaliyeed oo weli ka baqaya tallaalka COVID-19 | Radio Himilo
Home / Arrimaha Bulshada / Cilmi baaris: Dadka Soomaaliyeed oo weli ka baqaya tallaalka COVID-19
Posted by: Ahmed Haaddi May 17, 2022
Himilo – Soomaaliya waxay ka mid tahay waddamada uu saameeyay karoona, dadka ka badan 25 kun ayuu ku dhacay, halka ay u dhinteen tiro dhaafaysa kun qof oo ay ku jireen masuuliyiin sida ay sheegtay wasaaradda caafimaadka.
Cilmi baaris uu sameeyay ururka midowga Cilmi baarayaasha Soomaaliyeed ayaa lagu sheegay in dadka soomaaliyeed iyagoo heli kara tallaalka cudurka aysan diyaar u aheyn boqolkiisa toban. Halka Talaalku yahay lacag la’aan meelo kala duwan laga heli karo.
Karoonaha ayaa ah weli cudur dunida xagal daacinaya balse dadka Soomaaliyeed ayaa la sheegay inay ka meermeerayaan ama ka cago jiidayaan tallaalka iyogoo ka baqaya inuu dhibaato dambe u geysto. Waxaa la ogaaday inay sii yaraaneyso dadka qaadanaya hadda.
Qaar ka mid ah ka qeyb galayaasha daraasadda ayaa sheeegay inay baraha bulshada ku arkeen farriimo kala duwan oo lagu sheegayo in tallaalka uu qofka qaata u keeni karo dhalmo la’aan iyo mushkiladdo kale.
Cilmi baaris ayaa lagu xusay in dumarka ay yihiin dadka ugu badan ee aan tagin goobaha dadka lagu tallaalo, marka laga tago kuwa iskood u diida waxaa jira kuwo sheegay in raggooda ay u diideen inay cudurka iska tallaalaan.
Dadka ku nool xarumaha dadka barakaca ah ayaan qaadan tallaalka, sababta ayaa ah in goobaha ku dhaw xeryaha aysan ku oollin xarumaha laga bixiyo tallaalka Karoona. Dadka is tallaala waxay u badan yihiin keliya kuwo safarka u ah dibadda ee ka qaba inay xannibaad ama diidmo la kulmaan.
Sabaha aysan dadku isku tallaalin waxaa ka mid ah ayaa la yiri in dadka aysan helin xogo faahfaahsan oo ku saabsan tallaalka iyo waxtarkiisa. Dhalinyarada ka qeyb galay daraasadda ayaa rumeysan in tallaalka loogu tala galay dadka da’da ah.
Sababaha ay dadku uga didsan yihiin tallaalka, waxaa sidoo kale ka mid ah dadka oo aaminsan haddiii ay tagaan goobaha tallaalka inay cudurka ka soo qaadayaan.
Khubarrada caafimaadka ayaa qaba in cudurka uusan suulin isla markaana uu noqday mid lala nool yahay, sidaas darteedna ay muhiim tahay in tallaalka looga hortago.
Previous: Kuma cusba dhegaha dadka magaciisu
Next: Gueye: Maxaa sababay inuu seego kulankii Montpellier FC?